I-Sweet Studio enkabeni ye-Lüdinghausen - I-Airbnb
I-Sweet Studio enkabeni ye-Lüdinghausen
Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen, i-Germany
I-Giebel Studio emnandi uzoyithola enhliziyweni yesikhungo sedolobha elidala i-Lüdinghausens, eduze nesonto elikhulu elidala. Uzothola konke okudingayo ukuze uphumule, ngemva kosuku olude olujabulisayo. I-Studio isanda kulungiswa futhi inefenisha kuhlanganisa. i-inthanethi yamahhala kanye nekhishi elincane elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugeza.
Phambi kwesitebhisi sakho somnyango, ekhoneni nje, kukhona "i-Biergarden" kanye nezindawo zokudlela eziningana ezihlukene ezincomekayo kakhulu futhi umdwebi wezinwele ungumakhelwane wakho oqondile, kodwa namanje buthule ebusuku.
ISitudiyo esimnandi, esithulile futhi esisanda kulungiswa, Ikhishi elifakwe ngokugcwele negumbi lokugeza elihlotshiswe ngothando - kuhlanganisa. ukufinyelela kwe-inthanethi okungenantambo kwamahhala nokungena okuvumelana nezimo, konke okudingayo ukuze uhlale uphumule kahle.
Omakhelwane bakho ngqo emgwaqeni yilaba: ubuciko kanye ne-tattoo Studio, isitolo segrosa "esingasongwe" nezitolo ezahlukahlukene. Eduze kwayo kune-babor Institut kanye ne-ice cafe kanye nezindawo zokudlela eziningi ezihlukene.
Yebo, ngiyajabula ukuba lapho - kodwa kuphela lapho ngibuzwa.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lüdinghausen namaphethelo